Fahavakisan’i Tsiafahy : teny an-tsena no naheno vaovao ny zandary | NewsMada
Fahavakisan’i Tsiafahy : teny an-tsena no naheno vaovao ny zandary
Araka ny fanazavan’ny teo anivon’ny zandary, sarotra ny nahazo ny vaovao momba ny fahavakisan’ny fonjan’i Tsiafahy ny alahady teo, satria tsy mba nampandre azy ireo ny mpandraharaha fonja. “Teny an-tsena izahay no naheno fa vaky ny fonjan’i Tsiafahy. Nanontany ny tompon’andraikitra ary namaly ireo fa nisy gadra dimy tafatsoaka. Tsy ampy anefa ny vaovao nomen’ireo. Tamin’ny alalan’ny fanangonam-baovao sy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin’izany no nahafahana nahalala misimisy kokoa ny momba izany”, hoy ny zandary. Toy ny manambara ireto zandary fa nanafinafina ity tranga ity. ny mpandraharaha fonja
Namely kosa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana fa misy ny fepetra raisina rehefa mitranga ny toy izao. “Manao ny asany ny mpandraharaha fonja manao ny fikarohana momba ireo gadra nitsoaka. Efa nisy ny fampahafantarana momba azy ireo ny mpitandro filaminana”, hoy ny talen’ny seraseran’ny fitsarana.
Toy ny mifanilika eo ny roa tonta. Loza mitatao ho an’ny fiaraha-monina ireto gadra ireto. Milaza ny zandary fa miroso amin’ny fisavana kara-panondro amin’izao fotoana izao. Nohamafisina ny fisafoana sy ny fisavana ireo toerana mety nandosiran’ireo gadra ireo. Miandry ny vokatra ny rehetra. Ity ilay horonantsary “prison break” tena izy.